Gịnị bụ ndabara ọnọdụ maka imelite njikọ na a PowerPoint faịlụ? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Ppt melite njikọ - otu esi edozi
Ppt melite njikọ - otu esi edozi
Gịnị bụ ndabara ọnọdụ maka imelite njikọ na a PowerPoint faịlụ?
AutoUpdate ihe onwunwe
Ndewo ma nabata na ọwa Lab Computer na ụlọ nyocha YouTube yana ederede ederede a. Aga m egosi gị otu esi edozie mmemme ndabara gị site na mgbakwunye faịlụ yana ụdị faịlụ na mmemme, yabụ ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịga na menu Ntọala ka ị nwee ike ịnweta menu Ntọala yana n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ma na ala n'okpuru n'okpuru aka ekpe ị na-ahụ windo windo pịa akara ngosi windo elu na gia na naanị nke abụọ nọ ebe ahụ ma mepee ntọala ntọala ma ị nweghị ike ịhụ menu ntọala maka na ị na-eji ụdị mbụ nke windo 10 nnọọ na ị nwere ike Tinye ntọala na igbe ọchụchọ, pịa ihe dị elu na Ntọala menu ga-apụta. Ya mere, gbadaa ala.
Pịa igodo Windows, pịa gia iji weta menu ntọala. Ọ dị mma, ịnwere ike ịchọ ọzọ, mana nke a bụ ụzọ dịtụ mma karịa ile anya na njikwa njikwa. Ogwe njikwa nwere ike ịnweta.
Mana iji ruo ihe anyị chọrọ, ka anyị chọọ ntọala ndabara na ngalaba Ngwa ahụ, ebe a ị nwere ike pịa akara ngosi nke ngwa, nke m ga-eme na nke abụọ wee pịa ya site na ebe ahụ, mana ị nwekwara ike ịlaghachi na Ihuenyo mbu ma gosi gi ebe a na inwere ike ibanye ntọala mbu, ma ibido pinye ndi mmadu n'ime ntọala ngwa ndabara. Can nwere ike pịa na nke ahụ ga-emepee igbe a ebe a, yabụ m laghachiri n'ụlọ na ngwa ahụ, nke ahụ bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji chọpụta mgbe emelitere Windows gị. Yabụ ọ dị mma ugbu a ị na-elele ngwa ahụ yana atụmatụ ebe anyị achọghị nke a n'akụkụ aka ekpe nwere ike ịhụ nhọrọ dị iche iche anyị nwere yana onye na-acha anụnụ anụnụ n'elu aka ekpe bụ nke anyị nọ ugbu a Anyị chọrọ ngwa ọdịnala , pịa pịa ngwa ọdịnala ma lee ị nwere ike ịhụ ugbu a na ndị a bụ ngwa ọdịnala, Windows Microsoft Deems ndị kachasị mkpa, mepee mgbakwunye faịlụ dị iche iche na gburugburu Windows 10 gị, yabụ ugbu a anyị nwere ihe nchọgharị weebụ ebe ahụ.
A na-eme nke a ugbu a na Microsoft Edge dị ka nke a bụ ngwaahịa Microsoft na email ugbu a ka ọ bụrụ usoro ihe omume MailAppstore ọhụrụ nke arụnyere na Windows 10 na Windows 10 yabụ ebe a ị nwere ike ịhụ email Mail Icon Email gị akara ngosi nwere ike ịdịtụ ntakịrị ma ọ bụrụ na defaults etinyelarịrị na kọmpụta gị ma ugbu a, ọ ga-abanye na akara ngosi email na mmemme email na akara ngosi email site na ndabara. I nwekwara ike ịhụ foto gị ma mgbe m pịrị na foto m nwere nhọrọ iji gbanwee gaa na mmemme dị iche iche Mmemme nke arụnyere na kọmputa a, ndepụta gị nwere ike ịdị obere ntakịrị Windows 10 wuru n'ime ya bụ ngwa Foto ma ọ bụrụ ịchọrọ ilele foto gị na mmemme ọzọ na ndabara, ndị a bụ faịlụ jpeg na ihe ndị yiri ya, ugbu a ị nwere ike ịpị ihe ọ bụla ịchọrọ n'ebe ahụ ị nwekwara ike ịhụ na ihe nchọgharị weebụ Microsoft ka edobere EDGE ugbu a, ndị a abụghị kpọmkwem ndị m chọrọ igosi gị n'ụzọ zuru ezu il mana m ga-emetụ ya aka ebe a mgbe m chọrọ ozi ịntanetị imeghe na Outlook2016. Enwere m ike ịtọ akara ngosi m chọrọ ịchekwa ebe ahụ.
Naanị pịa akara ngosi m chọrọ ịhapụ ma ọ bụrụ na ị jiri Gmail. Yabụ ị nwere ike iji ozi ọ bụla ị nwere ike ịhọrọ mepee Chrome yabụ ahụrụ m obere obere ihe mgbe ị nọ na weebụsaịtị ma ọ bụ ozi ọrụ ndị ahịa ka ezigara ya. A ga-eziga ya site na email site na mmemme ndabara gị nke ị setịpụrụ na ndepụta ahụ Ndabara Appsok, nke ga-akpọrọ gị gaa na ndabara na App Bar File taabụ, nke ị nwere ike ịhụ ebe ahụ n'okpuru bọtịnụ nrụpụta.
Nke a bụ mgbatị faịlụ akọwapụtara nke mmemme ga-emepe. Ọ nwere ike na - ewekarị oge iji mejupụta, dabere na ole mmemme na ụdị faịlụ dị na kọmputa gị. Naanị nwee ndidi, hapụ ya ka ọ jupụta ma ọ ga-ejupụta na ị ga-ahụ ya n'aka ekpe ma ndị a bụ ụdị faịlụ mgbatị ahụ n'ezie.
May nwere ike ịchọpụta na ị naghị echegbu onwe gị banyere mmemme anaghị emepe ụgbọ oloko n'ihi faịlụ sistemụ mana mana ka ị si hụ ebe a, ihe atụ bụ faịlị 3D na-emepe na Adobe Photoshop na ndị a niile dị n'aka ekpe niile dị mkpụrụedem, n'ihi ya, anyị na-achọ otu faịlụ. Have ga-agbada ala ma gbalịa ịchọta ụdị faịlụ a. Ọ dị mfe ịchọta ozugbo ị rutere ebe ahụ ma ị nwere ike ịhụ m ka m na-agagharị na ya.
Ana m achọ naanị otu anyị nwere ike igwu egwu iji gosi gị otu esi eme ya, ị ga-ahụ faịlụ .contact ebe ahụ kọntaktị ọ bụla anyị na-aga na nchekwa kọntaktị gị ma echere m na anyị na-agbada ma chọọ faịlụ PDF. Ya mere, m na-agbadata ala, ndị a bụ mkpụrụedemede ya mere pịgharịa gaa na Ma ọ bụrụ na m gosipụtara gị ihe ndị a .docs, nke ahụ bụ mgbe ha ghọtara na ị nwere ozi ịntanetị na nke ahụ ga-emepe ebe ọ bụla Docx ga-emeghe n'okwu n'ime Okwu ka ihe niile ị ga-emel na a .docs faịlụ ị pịrị na njikọ a ọ ga-emeghe na otu okwu.
iwepụ ndị microsoft
Ugbu a ọ bụrụ na ịlaghachi na pdf ntụpọ ị ga - ahụ na ha mepere na Microsoft. Ejiri Microsoft Edge ugbu a na Microsoft Edge ka ihe niile dị n'aka ekpe mepee n'akụkụ aka nri naanị mepee folda akwụkwọ ị nwere ike ịhụ ugbu a. Ka anyị mee ya obere obere.
Ya mere ị ga - ahụ na ha niile na - emeghe. Nwere ike ịhụ akara ngosi E na-egosi na ọ ga-emeghe na EDGE. Ya mere, mgbe m pịa ya ugboro abụọ, ọ ga-emepe na Microsoft EDGE dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, enweghị m mmasị ịmepe PDFs m niile na ihe nchọgharị weebụ.
Achọrọ m imeghe nke m na Adobe Reader ugbu a, ịkwesịrị ịnwe mmemme etinyere na kọmputa ahụ ka ị nwee ike ịtọ ha Ma ọ bụrụ na m ga-pịa akara ngosi oke ma gwa ya ka m kwuo na m chọrọ imeghe PDF ọ bụla na Adobe Acrobat Reader, ma ị nwere ike ịhụ ozugbo m mere na akara ngosi ahụ gbanwere. Ya mere, ọ ga-eme nyocha ngwa ngwa nke kọmputa gị ma gbanwee faịlụ PDF niile ka m wee pịa ya okpukpu abụọ. Ga-ahụ ya ozugbo.
Ọ ga-emeghe na Adobe Acrobat Reader na PDF niile dị na kọmputa gị ga-agbanwe ka imeghe ya na mmemme ịtọghara ya ka ọ gbanwee n'ime ụdị ihe ndabara ahụ Ya mere, ka anyị laghachi ụdị faịlụ ị nwere ike ịkọ nke ọma site na ụfọdụ doro anya na ndị mmadụ na-eji PDFs oge niile, yabụ jiri otu n’ime ha. Docs, dika m gosiri gi na mbido. bụ ụdị faịlụ ọzọ na ndị mmadụ na-eji ọtụtụ mana mgbe m na-achọ mp3 ọ na-apụ ya ugbu a ha meghere na egwu egwu achọrọ m ka ọ mepee na iTunes ma ọ naghị egosi itunes na itunes ugbu a na otu a n'ihi na anaghị m 'etinyere iTunes ma ọ na-egosi m ihe ọkpụkpọ QuickTime na ụfọdụ obere nkọwa ị nwere ike ịgbanwe oge ọ bụla ị tinyere mp3 faịlụ ma ọ bụ dọwara CD kọmputa gị ga-enweta ya ma ị gbalịa ịkpọ ya ma mepee mp3, ọ ga-emeghe ihe ọ bụla ị họrọ site na ndepụta a, ọ dịghị mkpa ịchekwa ha, laghachi azụ ha niile site na iji akụ azụ na ọ bụ ya ozugbo.
Banye na Ntọala, Enweghị Egwuregwu, ma tinye ya dịka ọ dị na Windows 10, yabụ na-ekele gị maka ịlele ọwa YouTube Lab Computer Computer Vids. Echere na o nyeere gi aka, biko kụrụ bọtịnụ dị ka ma denye aha n'ihi na ọ na-enyere ọwa m aka ito, daalụ
Kedụ ka ị ga - esi melite akwụkwọ ọrụ jikọtara na PowerPoint?
Mgbe ọ bụla ị fanyere njikọfaịlụn'ime angosi,Power Pointsetịpụrụ ihe onwunwe AutoUpdate nke jikọtarafaịlụka Akpaaka sitendabara.
Amaara m na igbe ndị a dị njọ, mana na nkuzi a achọrọ m igosi gị otu esi eji njikọ na omume. Njikọ, dịka ọmụmaatụ, nwere ike iduga anyị n'ihe dị ka nke a. Anyị nwere ike ijikọ mgbe ị na-agagharị, mgbe ahụ anyị nwere ike ịmepụta bọtịnụ laghachi na igodo.
Anyị ga-pịa ya ma ọ ga-ewetaghachi anyị. Nke a bụ naanị ihe atụ eji, aga m akọwara gị ya n'uju karịa n'ihe mmụta a. Ugbu a ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmepụta ngagharị dị mfe site na iji slide dị ka nke a, nke a bụ igodo anyị, enwere m ike igosi gị aghụghọ ahụ.
Anyị nwere ike iji ma njikọ ma omume. Ka m gosi gị ka ha si arụ ọrụ. Ugbu a, ka anyị were nke a bụ ọdịdị na-egosi gị otu o si arụ ọrụ, slide ise dịka ọmụmaatụ, slide 20.
Oh, anyi enweghi 20 slides, ukwu, slide asatọ, ma slide 12. can nwere ike ịpị ihe ọ bụla can nwere ike ịga Fanye ma ị nwere ike Jiri Njikọ. Ọ bụrụ na ịpị Njikọ, ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, jikọta faịlụ dị na PC gị ma ọ bụ na Internetntanetị.
Can nwere ike ijikọ n'otu ebe na akwụkwọ a bụ nke a n'ezie ngosi a. Ma ọ bụ mepụta akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụ adreesị ozi-e. Ma ọtụtụ oge ịchọrọ ijikọ na slide ọzọ.
Anyị ga-eme nke a ebe a, slide ise. Ọ dị mma, ka anyị kwuo na nke a bụ mmalite nke ngalaba ọhụrụ. Anyị nwere ngalaba ọhụụ na slide 6, mana ọ baghị uru.
Ọ bụ naanị otu ihe atụ. Ọ dị mma, ugbu a ihe a nwere njikọ na ọ na-arụ ọrụ ugbu a. Ka m kọwaa nke ahụ, mee njikọ ọzọ maka slide asatọ.
Na na na, ukwuu. Na slide ikpeazụ m mere ka ọ buru ibu n'ihi na achọrọ m igosi gị ihe. E wezụga njikọ, ị nwekwara ike iji omume.
skype ikike ndị nne na nna
Omume m ga-adị ntakịrị karịa mana ha nwere ya. Nhọrọ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ịpị pịa, nke ga-eme otu ihe ahụ.
Ma ọ bụ anyị nwere ike ịrụ ọrụ na oke igwe, yabụ mgbe oke ahụ na-efegharị n'elu ihe a.
M pịa Mouse Over. M na-ahọrọ hyperlink ka. Ọfọn, kama Next slide ihe m chọrọ, Achọrọ m slide nọmba 12.
Ọ dị mma, ọ bụghị 12/13. Ọ dị mma? Ma ugbu a, ị hụla otu esi arụ ọrụ. M pịa Mgbanwe na F5 iji nweta ihe M ga-akpachara anya n'ihi na ozugbo m hover ya na òké, ọ na-akpaghị aka switches na slide m chọrọ.
Ya mere, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eme ihe. Aga m alaghachi otu oge, usoro omume, ebe ọ bụ na omume anaghị eme naanị na ịpị oke ahụ. Enwere m ike ịme ha site na ịpị nke òké, mana ha nwekwara ike iji iji òké mee ha.
Otú ọ dị, ndị a bụ njikọ dị mfe. Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere ike pịa ma ị nwere ike ịgbanwe gaa na mmịfe ahụ. Ọfọn ọ na-akpaghị aka na-esote anyị slide na-esote, mana otu a na-aga slide 5 ma na-agbada 8.
Abịa n’omume, naanị ihe m ga-eme bụ iji hover hover ka ị kpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nhọrọ ahụ. Nwere ike ịmepụta Back to Navigation dịka ọmụmaatụ. Ọ nwere ike ịdị ka nke a n'oge ụfọdụ.
Would ga-enwe obere bọtịnụ Mbugharị. Ikekwe anyị kwesịrị itinye akara ngosi ebe a. M na-aga Fanye, Njikọ na nke a ga-ejikọta na slide nke abụọ.
N'agbanyeghị ebe m nọ, dịka ọmụmaatụ na slide ise, m ga-anọ na slide a dịka ọmụmaatụ ma nwee ike qui ckly laghachi na igodo ahụ. Oh, ị hụrụ? M na-ebugharị m oke n'elu ihe a. Yabụ ị ga-akpachara anya, mgbe ọ gbasara omume.
Olileanya na nke a bụ ihe ọmụma bara uru ka ị. Ọ dị ịtụnanya na ịnwere ike iji ihe dịka nke a n'ime ngwanrọ ngosi. Ma dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ike iji nke a n'ọtụtụ ụzọ.
Nwere ike PowerPoint na-akpaghị aka melite na Excel?
Ijideziedata sitere na Excel, pịa aka na nriihena slide, tụọ akaIhe Njikọ Ihe Ejikọtara, ma họrọDezie. Ijinwelitedata na slide iji dakọtara data na faịlụ Excel mbụ, pịa aka nri naihena slide, wee pịaMmelite njikọ.
You maara na ihe ọ bụla ị mepụtara na Excel nwere ike igosipụta na PowerPoint na-akpaghị aka. N'isiokwu a, m ga-egosi gị tebụl na ihe osise eserese ma gosi gị otu esi etinye ha na nkwupụta gị ka oge ọ bụla ị melite Excel gị, PowerPoint gị ga-ejikọ data na akpaghị aka site na ọdịyo iji laa n'iyi, wee detuo, mado, detuo , Tapawa, tinye otu tebụl na eserese ahụ na otu akpa ka anyị bido hello pros, M Jill chere ruo n'ókè a Ọwa dị ihe niile Ọ kwesịrị ịtọhapụ ọrụ ụlọ ọrụ gị Microsoft Office gråvik mpi -ị ga - eme ihe omuma ihe omuma oru puru iche na nsonaazụ kacha mma M ga-ekerịta aghụghọ ọhụụ kwa izu ka ị nọrọ na-ege ntị, nọrọ na-ege ntị, denye aha na ebe a, pịa mgbịrịgba ahụ n'ebe ahụ ka ị ghara ichefu usoro aghụghọ ọ bụla. Echefula ohere a, ị nwere iji mee ka ụzọ gị dị mkpụmkpụ gas gasị na ọ bụ ihe anyị chọrọ ịhụ ka m nwere eserese a, yabụ otu eserese ahụ na-enye gị ike ọhụụ m bịara ebe a wee gbanwee ọnụọgụ ahụ na 110 dịka ọmụmaatụ ike ọkụ ọkụ 110 chaị ị 're right in the world so ka anyi lee ka esi eme ya ka anyi bido na ebe a enwere m okpokoro di mfe, onweghi usoro ebe a ma nweghi macro iji hu ya abughi nke ahu bu ihe imara na ulo ma hazie ya ihu uzo mbu nke ahụ na-abịa, mgbe ahụ achọrọ m ụfọdụ ebe a ka ọ bụ otu isi ntọala Excel wee gosi data ahụ ma gbakwunye akara na eserese C, yabụ otu ihe ahụ, otu ihe eserese a ka m pịa ctrl C nweta ctrl C i am joking ctrl C see my powerpoint here m bia ebe a mepee efu ọ bụla ihe pụrụ iche kpamkpam efu olee otú ọ na-abịa ebe a ntacha eze mado pụrụ iche ebe a bụ a aghụghọ m na-ahọrọ njikọ fanye na pịa OK nke ọma dị ka ezigbo ezi otu esereese ebe a otu ọrụ ebe a ugbu a ka anyị nwee Mary ebe a rubere na February, ọ ghaziri n'ezie 116 yabụ na eserese dị ka ọ dị mma n'ihi na alụmdi na nwunye mebiri 160, lee 160 na mgbe ahụ m mehiere n'ezie na ahịa robertis na-ere nnu 200 roberts nnu ka anyị kwuo 170 na ọ na-arụ ọrụ incredibly bụghị naanị ihe ị chọrọ Mee ka ọrụ a bụrụ isi iyi a nke pụtara na faịlụ kachasị mma yabụ ka anyị lelee faịlụ kachasị mma ebe a ndị nwe ala a ị nweghị ike ịgbanwe ya, ọ bụrụ na ịchekwaa ha ma debe ya na kọmputa gị ma ọ bụ OneDrive ma ọ bụ na ígwé ojii ị maara na SharePoint ma Onedrive na SharePoint na ha nọ n'igwe ojii, oge obula ị zọpụtara ebe ahụ ma mee njikọ a, ị na-eme nke a Control- ccontrol-v cannotnweghị ike ịgbanwe faịlụ Excel. Nweghị ike ịgbanwe data ahụ, ị ​​nweghị ike ịgbanwe data ahụ.
Nweghị ike ịgbanwe aha na ọnọdụ maka na ọ bụrụ na ịmee, njikọ a dị n'etiti PowerPoint na Excel ga-agbaji mgbe edozi ederede. Achọpụtara m na ahapụrụ ụfọdụ isiokwu dị mkpa ka m wee kpebie ma m ga-eziga dị ka nke a ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-aka mma itinye mpempe mgbakwunye a ugbu a ma echere m na ọ ga-abụ ihe ziri ezi na enweghị nkọwa ọzọ. Ka anyị hụ ka o si arụ ọrụ dịka akụkụ nke edemede ahụ n'onwe ya.
Aga m egosi gị otu esi emekọrịta na tebụl. Achọghị m naanị eserese kamakwa tebụl a na ngosi m. Iji mee nke a, m kwesịrị ịmepụta saịtị ọhụrụ.
Gaa n'otu usoro ahụ wee mado ya site na nzọụkwụ ọzọ m na-achịkwa C n'ụzọ ọ dị, a na-egosi tebụl ebe a na PowerPoint, ọ bụrụ na m gbanwee ihe ebe a, kwuo ise maka uru ọ bara na akụkụ iwu nke ụbọchị taa teepu edekọ na-gutted ugbu a nkịtị bụ a ịdọ aka ná ntị ozi oge ọ bụla ị na-emeghe gị ikepoint, a ịdọ aka ná ntị ozi ga-egosi na-ajụ gị ma ndị niile na mpụga isi mmalite na nke a powerpoint ga-enweta bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na ị maara ha niile ị kụrụ melite leaks, ma oburu na imaghi na ha nile kuru kagbuo ma ugbua aga m egosi gi otu esi enyocha uzo nile si na mpụga ma mezie njikọ ọ bụrụ na agbajiri ya ka anyị kwuo na atụkwaghị m obi amaghị m ihe ndị ọzọ ọ bụ. Nke a bụ ozi ịdọ aka na ntị nke ị na - apụta ugbu a oge ọ bụla ị banyere na ngosipụta nke njikọ dị na mpụga na-ekwu ya mere anyị, atụkwaghị m obi na amaghị m njikọ njikọ niile n'ihi na emeghị m ya kụrụ m kagbuo na ihe oyiyi ikpeazụ o nwetara maka sink ka egosiri nke na-apụtaghị data kachasị ọhụrụ mgbe m batara ebe a ka m gafee ma gbanwee nke a na 20 wee laghachi ebe a anaghị egosipụta otu esi edozi nke mbụ. lelee ebe mpụga niile, iji lelee ya ị ga-abịa faịlụ ahụ wee pịa ebe a W na aka nri ọ bụ njikọ na faịlụ ahụ, lee ị na-ahụ njikọ njikọ mpụga niile anyị nwere n'ihi na otu bụ tebụl na otu tebụl bụ mbụ tebụl. Yabụ ọ bụrụ na m gbanwee steak, ma ọ bụ aha ọ bụla aha faịlụ ndị ahụ, mee ya choo-choo, m ga-agụ akwụkwọ Jud na ebe a. iche Otu na-aga maka tebụl.
Ka anyị lee ihe ọ bụrụ na m gbanwee, mgbe m gbalịrị iti ụbọchị ịmara na m ga-eji aka nri pịa ma họrọ njikọ dị mkpirikpi wee hụ ma njikọ ahụ adịghị, ọ na-egbu oge na ihe mere ebe a, lee anya ebe a ịkpọ njikọ maka P OTUS na-anwa inweta akwụkwọ nke ise ma ọ nweghị, mgbe m mechiri ikike a wee mepee ya, ọ bụghị naanị na m na-enweta ịdọ aka na ntị, mana ọbụlagodi na anaghị m akụ njikọ a ọ gaghị chọta faịlụ kachasị mma dịka m degharịrị aha ya na nke a bụ ozi ọ na-ekwu Hey ị nwere njikọ agbajiri agbawa m na-achọ inweta faịlụ ma enweghị ike ịchọta ya. Gaa ebe ahụ wee dozie njikọ ahụ iji dozie ya na otu faịlụ ahụ dị ala ebe a n'aka nri ma ugbu a, achọrọ m ịhọrọ ndị niile gbajiri agbaji wee pịa ọchụchọ. M na-ele na nchekwa ma ọ bụ ebe ọ nwere ike ịbụ a gbara na SharePoint ime kọmputa gị n'ebe ọ bụla ọ bụ akụkụ, na-ele na-emeghe faịlụ, ọ na-egosipụta ebe a na ọ na-aghọ otu ihe ahụ nke abụọ njikọ, ya mere ha abụọ bụ now oh gbaa, ọ bụrụ na m pịa aplate ugbu a, a na-emelite ọdịnaya m n'ebe ahụ na oche ma n'ikpeazụ, a na-enyocha igbe nlele a iji gosi mmelite kachasị ọhụrụ site na Excel na PowerPoint gị anaghị arụ ọrụ mgbe niile, mana mgbe ọ dịkarịa ala na-ejikọ njikọ nọ n'ọrụ chebe ya lelee naanị ma ọ bụrụ na mechie ya ka ịlaghachi ebe ahụ wee hụ 320 ma ọ bụrụ na m mepee akwụkwọ ahụ ọzọ wee hụ nnwale gị na maka Marek maka 28th maka marek na anaghị egosi na m ga-eji aka nri pịa bọtịnụ aka nri ma họrọ njikọta njikọta ma ugbu a, mary slaneysame ebe a ngwa ngwa marinade ugbu a n'ikpeazụ nwekwara n'elu tebụl sink Ọ bụrụ na tebụl nke Ex cel omume nkwado isi ihe dịtụ iche na eserese n'ihi na ọ na-ebubo mmewere nke na-ese n'elu Excel A table bụ ihe mejupụtara nke mkpụrụ ndụ Excel n'onwe ha, yabụ na ị ga-ke ep tebụl dị na ọnọdụ ị nweghị ike ịkwaga tebụl Younweghị ike ịgbakwunye ahịrị ndị dị n'elu ma ọ bụ ahịrị dị n'aka ekpe n'ihi na ọ bụrụ na ịmee, foto a ga-adị iche na PowerPoint.
Ka anyị hụ ihe ọ pụtara ma ọ bụrụ na m tinye akara ahụ ebe a wee laghachi ebe a? Right pịa Returnback na PowerPoint Aka nri pịa ma mepee njikọ nke akara nke mbụ ebe a bụ akara mbụ m gbakwunyere ebe a iji dozie ya. Enwere ụzọ abụọ n'oge a iji wepu owerPoint ma rụrịta ụka ọzọ ọ ga-alaghachi na ebe mbụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ọ na - esiri ike idozi okpokoro ahụ n'ihi na agbakwunyela ọtụtụ ahịrị ndị ahụ na faịlụ gị kachasị mma, ọ na - esikwa ike ịmegharị tebụl ahụ ebe ọ dị, ebe ọ bụ naanị obere tebụl ma mepụtaghachi, nke ahụ bụ maka taa ị masịrị ya, ejiri m n'aka na ị nwere mmasị igosipụta ya site na ịpị bọtịnụ yiri ebe a n'aka nri maka ịhụ usoro aghụghọ kwa izu, nọrọ na-ege ntị ruo mgbe ahụ
Kedu ka m ga-esi nweta hyperlinks azụ na PowerPoint?
Iji jikọọ data naExcel, pịa 'Data' na ihe ngosi ihe di n'elu chaatị wee họrọ 'ExcelNjikọ '. ... N'oge a ịnwere ikesetịpụ nke aPowerPoint Excelnjikọ naakpaghị aka melite. Lelee igbe dị n'akụkụ nhọrọ 'Ume umedataakpaghị akana-emeghe 'wee pịa' OK 'ọzọ.
Na PowerPoint, ị nwere ike ịmepụta njikọ na ibe weebụ, adreesị ozi-e, faịlụ, ma ọ bụ slide. I nwedịrị ike ịmalite mmemme. Nwere ike ime ihe a niile site na iji ngwaọrụ abụọ akpọrọ hyperlinks na bọtịnụ ihe.
Ka anyị lee ka hyperlinks si arụ ọrụ. Mgbe nghazi gasị, ndị ọrụ niile ga-enweta kọmputa nke ihe ngosi ndị a. Ọ ga-amasị m itinye slide ọhụrụ nwere ndepụta nke akụrụngwa maka ndị ọrụ ọhụụ.
Fọdụ n'ime ihe ndị a bụ weebụsaịtị. Enwere m ike itinye hyperlink na slide a na-atụ aka na weebụsaịtị. A hyperlink bụ njikọ si slide na ibe weebụ, adreesị ozi-e, slide, ma ọ bụ faịlụ.
Enwere ike iji ederede ma ọ bụ ihe dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ ọdịdị dị ka hyperlink. Insertfanye a hyperlink, mbụ họrọ Textor ihe ị chọrọ iji. N'okwu a, achọrọ m ka ederede a bụrụ hyperlink ma ọ bụ jikọta weebụsaịtị, yabụ m họrọ ya.
Wee họrọ Fanye taabụ. Na otu Njikọ, pịa iwu Hyperlink. Nke a mepee Fanye Hyperlink igbe.
Ọ bụrụ na ị na-eji ederede, ị ga-ahụ igbe ederede na elu iji gosipụta na-arụ ọrụ. Ederede anyị họọrọ na slide ga-apụta ebe ahụ. N'akụkụ aka ekpe nke igbe okwu ị ga-ahụ nhọrọ anọ: Njikwa dị ugbu a ma ọ bụ Web peeji nke, Ebe na Akwụkwọ A, Mepụta Akwụkwọ Ọhụrụ, na Adreesị Email.
Achọrọ m ka ederede a jikọta na ibe weebụ ka m wee debe nhọrọ ahụ. Ugbu a, na mpaghara adreesị, achọrọ m pịnye na adreesị weebụsaịtị nke m chọrọ igosipụta mgbe pịrịpị njikọ ahụ, yabụ ana m abanye na www.GCFLearnFree.org.
Mgbe ị banyere adreesị weebụ, kpebie ma ị chọrọ a tooltip ịpụta mgbe ị hover n'elu hyperlink. Ntuziaka bụ obere igbe ederede na-apụta mgbe ị na-agabiga iwu. Ndụmọdụ ahụ na-enye ntuziaka ma ọ bụ kọwaa karịa gbasara iwu ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye tooltip, pịa pịa Tooltip na obere igbe ga-apụta. Naanị tinye ederede ịchọrọ igosi dị ka isi. You've banye ederede gị, pịa OK, wee pịa OK na Insert Hyperlink igbe.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ederede, pịa ebe ọ bụla na slide iji họrọ ederede ka ị nwee ike ịhụ hyperlink ahụ. Ebe ọ bụ na anyị na-eji ederede ugbu a, ị ga-ahụ na ederede hyperlinked gosipụtara ma gosipụta ya na agba nke dabara na atụmatụ agba. Mgbe ị jiri hyperlink ihe, ọ nweghị nhazi ọzọ.
Na PowerPoint, hyperlinks na-arụsi ọrụ ike mgbe ị na-agba ọsọ, yabụ ka ịhọrọ Ihe ngosi mmịfe. Ugbu a ọ bụrụ na ị na-akpali pointer na ntụziaka nke hyperlink, ọ ga-aghọ aka. Nke a na-egosi na ị nwere ike pịa ya.
Nke a bara uru karịsịa mgbe ị na-eji ihe dị ka eserese ma ọ bụ ọdịdị dị ka hyperlink. Mgbe ị hover na hyperlink, a tooltip na-egosi, ma ọ bụrụ na ị banyere otu. Naanị pịa hyperlink ederede iji mepee webpage mgbe ejikọrọ na ịntanetị.
Dị ka e kwuru na mbụ, ị nwere ike ịgụnye hyperlink na slide ọzọ na ngosi. Na AdWorks, ndị njikwa nwere akwụkwọ na ihe ndị ọzọ na-adịghị n'ịntanetị ha nwere ike ibinye ndị ọrụ. Ikekwe ọ ga-amasị m ịgụnye hyperlink ebe a na-ejikọ na eserese nhazi anyị.
Iji mee nke a, họrọ ederede ma ọ bụ ihe ịchọrọ iji dị ka hyperlink, wee pịa iwu Hyperlink na Fanye taabụ. Insert Hyperlink igbe na-egosi. Pịa Ebe a na Akwụkwọ a n'ihi na anyị chọrọ ejikọta ọzọ slide.
Mgbe ị mere nke a, igbe okwu ga-agbanwe na ị ga-ahụ igbe nwere ndepụta nke ihe nkiri slide na nkwupụta gị. Ga-ahụkwa ndepụta ndepụta zuru ezu nke slide dị ka slide mbu, slide ikpeazụ, slide ọzọ. Mgbe ịpịrị a slide, a tọmbneelụ nke ya na-egosi na slide preview ebe.
Họrọ mmịfe ịchọrọ ijikọ, na nke a, slide 6, nzukọ anyị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ igbakwunye tooltip, nke a bụ oge gị ka ịgbakwunye ya ma mgbe ịmechara pịa OK. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ederede, ị nwere ike ịhụ njikọ njikọ na slide.
Ka anyị lee ya anya na ngosi ngosi mmịfe, mgbe anyị pịa hyperlink ahụ, slide nzukọ na-abịa. Hụ, ịtinye hyperlinks esighi ike ma ọlị, m kụrụ Esc ka m laghachi azụ n'echiche nkịtị. Ekwuru m na mbụ na ị nwere ike jikọọ na faịlụ.
Ka anyị kwuo na achọrọ m ijikọ na ngosi maka ndokwa ego na ezumike nka. Njikọ njikọ a na-arụ ọrụ dịka abụọ anyị lere anya. Mgbe ịhọrọ ederede ma ọ bụ ihe ịchọrọ iji dị ka hyperlink, ị nwere ike mepee Fanye Hyperlink igbe.
Enwere m ike ịmepụta akwụkwọ ọhụụ ma jikọta ya ma ọ bụrụ na achọrọ m, mana n'eziokwu, anaghị m eji nhọrọ ahụ. M ga-ahapụ gị ka ị nyochaa nhọrọ a n'onwe gị, Aga m ahọrọ faịlụ dị ugbu a ma ọ bụ Webpage, n'etiti m nwere ngwaọrụ niile m chọrọ iji chọta faịlụ ahụ, faịlụ m chọrọ bụ ebe a na Desktọpụ m ka m ' Naanị họrọ ya, ị ga-ahụ aha faịlụ ahụ na igbe Adreesị, pịa bọtịnụ Ibe edokwubara na igbe okwu ga-apụta, site ebe a ị ga-ahọrọ slide na ngosipụta atụmatụ ego gị ịchọrọ iji. Njikọ ka, wee pịa OK. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbanye otu ngwa ọrụ, ugbu a bụ oge ịme ya.
Wee pịa OK iji mechie igbe okwu Fanye Hyperlink. Mgbe ị na-ịgbanwee gaa na ngosi mmịfe ele na pịa hyperlink, ị ga-ahụ slide na anyị na-akara na anyị ego atụmatụ ihe ngosi mmịfe. N'oge ngosi mmịfe ngosi, ọ ga-aba uru ịmara otu esi emepụta njikọ njikọta na faịlị, slides, ibe weebụ, na adreesị email.
Gbalịa ya n'onwe gị ka ị hụ otu ọ dị mfe iji mepụta hyperlinks.
Olee otú ị melite njikọ na a ngosi?
Iji melite njikọ na iji igbe njikọ njikọ :: :: Chekwaa ngosi. Pịa Njikwa taabụ na Ribbon ma họrọ Dezie Njikọ Faịlị ma ọ bụ pịa Dezie Njikọ Faịlị na Ogwe Ndenye Ngwa Ngwa. Njikọ njikọ Links na-egosi. Pịa njikọ ị chọrọ imelite. Pịa Mmelite Ugbu a.
Kedu ka m ga - esi emelite tebụl jikọtara na PowerPoint?
Site na faịlụ Powerpoint mechiri, m na-emeghe ihe ọ bụla dị mkpa Excel faịlụ (s) nke tebụl njikọ dị. Mgbe ahụ, m ga-emeghe faịlụ Powerpoint. Mgbe ụfọdụ, ọkọlọtọ ịdọ aka na ntị 'Mmelite Njikọ' 'ka ihe ngosi ọkọlọtọ na-egosi gafee elu n'akụkụ ngwa ọrụ .... M ga-eme ka nke a (akpaka).
Kedu ka ị si agbanwe njikọ na PowerPoint?
Pịa njikọ ị chọrọ ịgbanwe. Pịa Change Isi Iyi. Nyagharịa ebe ọhụrụ nke faịlụ na pịa ya. Pịa Mepee. Pịa Mechie. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ijikọ faịlụ Excel na PowerPoint, ị ga-ejikarị jikwaa njikọ ndị ahụ. Tupu izipu faịlụ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị, ị nwekwara ike ịhapụ njikọ.
Kedu ka ị si emelite njikọ na faịlụ?
Pịa Njikwa taabụ na Ribbon ma họrọ Dezie Njikọ Faịlị ma ọ bụ pịa Dezie Njikọ Faịlị na Ogwe Ndenye Ngwa Ngwa. Njikọ njikọ Links na-egosi. Pịa njikọ ị chọrọ imelite. Pịa Mmelite Ugbu a. I nwekwara ike ịhọrọ akpaka Mmelite na-akpaghị aka imelite mgbe faịlụ ahụ mepere. Tinyegharịa njikọ ndị ọzọ.